people Nepal » किन जाँदैछन् निधि र भट्टराई एकसाथ भारत ? किन जाँदैछन् निधि र भट्टराई एकसाथ भारत ? – people Nepal
किन जाँदैछन् निधि र भट्टराई एकसाथ भारत ?
Posted on March 12, 2017 March 12, 2017 by Tara Nidhi
काठमाडौं,फागुन २९ – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र नयाँशक्ति पार्टीका प्रमुख बाबुराम भट्टराई एकैसाट यो साता भारत भ्रमणमा जान लागेका छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पाटीृका नेताहरुद्वारा सञ्चालित थिंक ट्यांक ‘इन्डिया फाउन्डेसन’ ले नयाँदिल्लीमा आयोजना गर्न लागेको ‘प्रतिआतंकवाद सम्मेलन २०१७’ मा सहभागी हुन उनीहरु जान लागेका हुन् ।
गृहमन्त्री निधि सोमबार र पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई मंगलबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् । सम्मेलनमा निधिलाई वक्ताका रुपमा निमन्त्रणा गरिएको छ भने भट्टराईलाई सम्मेलनको ‘स्पेशल सेसन टु’ मा मुख्य वक्ताको रुपमा डाकिएको छ ।
उनले माओवादी विद्रोहदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादी प्रवेश गर्दाको अवस्थाबारे प्रवचन दिने बताइएको आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । निधिले प्रतिआतंकवादका सवालमा नेपालको धारणा राख्नेछन् । उनले नेपाल र भारतबीचको प्रतिआतंकवादसम्बन्धी सहकार्य कसरी बलियो पार्ने भन्नेबारे बोल्नेछन् ।